Aqriso Nuxurka Khudbadii Xasaasiga aheed uu Jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya uu kaga hadlay arimo kala duwan	| Salaan Media
Aqriso Nuxurka Khudbadii Xasaasiga aheed uu Jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya uu kaga hadlay arimo kala duwan
May 3, 2013 | Published by: admin
Sidaas daraadeed, waxaad la socotaan in Kismaayo uu ka socdo shir la doonayo in lagu dhiso nidaam federaal ah. Dowladdu dhowr jeer ayey tagtey Kismaayo oo wadahadallo la yeelatay dadka wada shirkaas. Hase ahaatee, waxaa jirta arrin dastuuri ah oo Dowladdu aysan ka hor imaan karin oo ah kan aan ku dhaaranay inaan illaalino. Maadaama, waajibka Dowladdu uu yahay meelmarinta nidaamka Fedraalka, Waxaan xoojinaynaa in awooda shacabka la siiyo oo ay dadku dhistaan maamulo ay iyagu raali ka yihiin, hase ahaatee waa in ay Dastuurka waafaqsanataa. Dawladu marna ma aqbalayso go’aan haldhinac ah oo lagu dhaqaaqo, waxaanse doonaynaa go,aan loo dhanyahay oo Baarlamaanka, Xukuumada iyo Hay’adaha dawlada Federaalka oo dhan ay qayb kawada yihiin. Dowladdu waxey rabtaa wixii shacabku rabo oo ah in shacabka Soomaaliyeed isu yimaadaan oo wada hadlaan isla markaana ay dowladdooda kala shaqeeyaan sidii sharciyadda lagu heli lahaa. Waxaan ka codsanay dadka ku shirsan Kismaayo inay shirka socda uu noqdo mid dib-u-heshiisiin iyo wadatashi oo ay dadka deegaanka isu soo dhoweyn kara isla markaana la shaqeeya dowladda.
Waxaan ognahay in degmooyinka qaarkood ee Jubbooyinka ay weli gacanta Al-Shabaab ku jiraan oo u baahan in laga xoreeyo oo shacabka deegaankaas la gaarsiiyo adeegyada bulshada. Dan uma aha shacabka Deegaanada Jubbooyinka iyo Gedo in si caadifi ah la isu abaabulo oo laga horyimaado Dowlad iyo nidaam, oo aan hubno inay dan u tahay Al-shabaab oo awalba raadinayey khilaaf joogta ah, fowdo iyo nidaam la’aan. Shacabka Soomaaliyeed waxey sugayaan Dowladdooda oo hirgelisa dhammaan arrimaha loo igmaday (Mandate) oo aan rabno inaan wadahadal, dib-u-heshiisiin ku dhameystirno khilaaf walba oo jira si aan u wada gaarno aragtida fog ee aan wada hiigsaneyno ee ah inaan doorashooyin xor ah dalka gaarsiino. Waxaan isla garanay in mudnaan gaar ah aan siino arrimaha amniga, garsoorka, iyo maamulka Maaliyadda iyo dib-u-heshiisiinta. Haddaba ii oggolaada inaan dul maro arrimahan:
Waxaan horumar baaxad leh ka sameyney dib u habeynta maamulka maaliyadda. Waxaa farxad noo wada ah in Dowladda Norway ay maanta ku qanacday in nidaamka aan sameysanay uu yahay mid kalsooni gelin kara kaalmada wadamada caalamka ay sida tooska ah u siinayaa dowladda. Norway waxey bilaabeysaa 1da Juun inay si toos ah noo soo gaarsiiyaan dhaqaale lagu kabayo miisaaniyadda dalka. Wasaaradda maaliyadda waxey soo dhameystirtay qorshihii maamulka maaliyadda (Public Finance Management) oo dhaqangelinteeda la bilaabi doono.
Sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxey markii ugu horreysey taariikhda soo bandhigtay xisaab xirkii 3dii bilood ee ugu horreysey taasoo waafaqsan ansixintii baarlamaanka sharafta leh ay miisaaniyaddaas ku ansixiyeen. Haa, ma helin dhaqaalihii aan sii saadaalinin ee dhanka miisaaniyadda, laakin waxaa qasab nagu noqotay inaan inta yar ee aan heli karnay aan si wanaagsan u maamulno. Wasaaraddu waxey kaloo diyaarisey qorshe aan dooneyno in lagu bilaabo canshuuraha berriga oo kobcin doonto daqliga guud ee dowladda, iyadoo la sameyn doono wacyigelin ku wajahan sidii shacabka iyo ganacsatada ay kaalin fiican uga qaadan lahaayeen canshuur ururinta oo ah mid ku waajibta dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed, si dalku u noqdo dal ay shacabka Soomaaliyeed leeyihiin.
Shaki iigama jira haddii shacabka iyo ganacsatadu is kaashadaan inaan heli karno daqli aan howl maalmeedka dowladda ku socodsiino, isla markaan adeega bulshada aan wada gaarsiino dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
7da May 2013 waa maalin weyn oo taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ku faani karaan. Waa maalin ay Soomaaliya shir caalami ah la guddoomineyso dowladda Ingiriiska. Waa maalin ay caalamku wada arkayaan Soomaaliya oo dib ugu soo laabatay beesha caalamka, isla markaan la shir guddoomineysa waddan ka mid ah waddamada caalamka ugu horreeya. Shirkan waa uu ka duwanyahay shirarkii hore ee London lagu qabtay, waayo shirkaas waxuu ahaa mid UK ay u qabatay Soomaaliya, ha yeeshee shirkan waa mid UK aan ku heshiinay islana meeldhignay sidii Aduunku uu Soomaaliya u kaalmayn lahaa.
Waxaa shirka casumaadiisa fidiyey aniga iyo ra’iisuwasaaraha Ingiriiska, Waxaan shirka horgaynaynaa qorshayaal ay xukuumadu dejisay, kuwaasoo qayb ka ah lixdii tiir ee mudnaanta inoo ahayd. Waxaan horgaynaynaa shirka Qorsheheena Amniga, Cadaalada, Maareynta Maaliyada iyo aragtideena siyaasadeed. Waxaa kaloo kusoo qaadi doonaa sidii looga hortegi lahaa xadgudubka loo gaysto Haweenka, gaar ahaan kufsiga iyo taciyada kale.
Dowladda UK waxey noqotay dowladdii ugu horreysey ee muddo labo sano ah shir caalami ah ku qabatay London oo ay weliba Soomaalida u oggolaato inay shirka hoggaamiyaan. Waan uga mahadcelinaynaa dawlada UK iyo Ra’iisuwasaare David Cameron xilka uu iska saaray arrimaha Soomaaliya. Waxaan la socotaan in arrimaha Soomaaliya ay haatan mudnaan aduunka kaalin wayn ka gashay.
Waxaa lagu soo qaday Kulankii G8 ka, waxaa shirka London xigi doona shir uu Bisha Semptember uu Midowga Yurub qabanayo kaasoo deeq aruurin dib u dhiska iyo horumarinta la xariirta lagu qabanayo.
Waxaa kaloo bishan dhamaadkeeda Dawlada Japan ay qabaynaysaa shir lagu taageerayo dawlada Soomaaliya iyo dib u dhiska dalka iyo Horumarinta ah. Waxaad kaloo ogtihiin in dawlada Maraykanaka ay aqoonsatay dawlada Soomaaliya sidoo kale markii ugu horaysay aan ku soo noqonay hay’ada maaliyada ee caalimaga ah ee aan dib ugu soo noqonay IMF iyo in aan hada heli karno deeqaha Baanka aduunka.
Waxaan ka fileynaa shirka London in beesha caalamku ay taageeraan qorsheyaasha aan hordhigno ee amniga, xasilinta, garsoorka iyo maareynta maaliyadda loo helo dhaqaalihii lagu hirgelin lahaa. Caalamku ma doonayaan in Soomaaliya ay dib ugu noqoto fowdada, dagaalada sokeeye, nidaam la’aanta, burcad badeednimada iyo argagaxisada.
Caalamku waxuu doonayaa in Sooomaaliya ay noqoto dal nabad ah oo ka mid noqdo waddamada caalamka. Soomaaliduna waxey doonayaan in dalku xasilo, oo soomaaliya ay doorkeedii hore iyo mid ka fiican qaadato oo ay beesha caalamka wax la qabsato.
Maanta waxaa is wada waafaqa danaha shacabka soomaaliyeed iyo kuwa beesha caalamka. UK-na waxey noo sahashay fursadan ee Soomaaliyeey aan ka wada faa’iideysano.
Waxaan jeclaan lahaa inaan markale idiinkaga mahadcelinayo fursada aad I siiseen, oo aad waqtigiina qaaliga ah I siiseen. Wada shaqeyn wacan iyo nooli kulanto. Wa salaamu caleykum waraxmatullaXafiiska Salaanmesia/Muqdisho Somalia